octobre 2020 – Trinitera Malagasy
27 octobre 2020 Njara Pascal
Boky Eksaody 22, 21-27 Sal 17 1 Tesalonika 1, 5-10 Md Matio 22, 34-40 Tia an’Andriamanitra sy ny namana no maha-kristianina antsika. Ho an’iza no hanomezantsika ny tenantsika? Ho amin’ny inona no himatimatesantsika? Ho an’ilay “nanala antsika tamin’ny haizina ho amin’ny Fanjakan’ny Zanany Malalany” ve (Kol 1, 13) sa ho an’izay zava-mandalo tsy hanaraka…
2 octobre 2020 Njara Pascal
Izaia 5, 1-7 Salamo 79 Filipiana 4, 6-9 Md Matio 21, 33-43 Tsy voatokana ho an’ny olomboatsongo ny Fanjakan’ny lanitra! Tanim-boalobok’Andriamanitra isika “Avy amin’Andriamanitra sa avy amin’ny olona ny fahefan’i Jesoa?” hoy ny fanontanian’ny Jody. “Avy amin’Andriamanitra sa avy amin’ny olona ny Batemin’i Joany?” hoy ny navalin’i Jesoa (Mt 21, 23-27). Ary satria ny…
Alahady faha-33 mandavantaona Taona B
Alahady faha-32 mandavantaona Taona B
Alahady faha-31 mandavantaona Taona B
Zoma faha-27 mandavantaona
8 desambra 19 mars 25 mars 28 janvier agnès Alahady annonciation Aperuit illis Batemy Bon Remède coronavirus ezekiela famindram-po Fianakaviana Fiaviana Immaculée innocents Jesoa Joany karemy Kristy Mpanjaka lavenona lazara Lioka Mahantra Marka Martiry Masina Maria matio Md Josefa Noely Papa François Rainay Rano samaritana sampankazo senza messa Taona A Taona B tempoly Teraka Jamba tomany Toriteny tsodrano Zaza mpandany
Archives Sélectionner un mois novembre 2021 (3) octobre 2021 (10) octobre 2020 (2) septembre 2020 (2) août 2020 (1) mai 2020 (1) avril 2020 (4) mars 2020 (36) février 2020 (28) janvier 2020 (31) décembre 2019 (38) septembre 2019 (1) août 2019 (13)
Alahady faha-34 mandavantaona Taona B 20 novembre 2021